Mayelana NATHI - Hangzhou Precision Machinery Co., Ltd.
Inqubo yokwelashwa okusha ketshezi-- Inqubo ye-liquid ultrasonic
I-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. ivela kumhlangano wokucobelelana ngolwazi womndeni omncane kusukela ngo-1995. Ukuze uxazulule isidingo semakethe sezinto eziyinhloko ze-ultrasonic: ama-transducers.Precision Hangzhou ube yinkampani yokuqala yezimboni ye-ultrasonic welding transducer eChina.Ngaphezu kweminyaka engaphezu kwengu-20 yokusebenza kanzima, manje I-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. ibhizinisi lokukhiqiza lobuchwepheshe elihlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza kwemishini ye-ultrasonic, amathangi enqubo namasethi wemishini ephelele. Sinezinti, ama-R & Ds, ukuthengisa nangemva kokuthengisa amaqembu amaqembu abasebenzi abangaphezu kuka-100. Ikakhulu, ithimba lethu lobuchwepheshe be-R & D selifinyelele ekubambisaneni okuqinile namakholeji asekhaya namanyuvesi kanye nezikhungo zocwaningo lobuchwepheshe.
Ngemuva kwesikhathi eside sokuhlolwa kwemakethe nokuzilungisa, manje sithola imiphumela emihle kakhulu ekuhlakazeni izinto ezintsha zamandla, ukulungiselela i-graphene, ukusabalalisa kwe-alumina, ukusabalalisa kokumboza, ukukhiqizwa kwe-biodiesel, ukusabalalisa kwe-silica, ukukhishwa kwemithi yamaShayina, inzalo yezimboni zokudla kanye ne-emulsification, ukuxubana kwamakhemikhali kanye ne-homogenization, ukuhlanzwa kwendle i-COD, inzalo embonini yezemithi, ukugaya nokuhlanza.
I-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. siphikelela ekuzuzeni imakethe ngekhwalithi, ukuwina amakhasimende ngensizakalo, futhi njalo sigxile kuzintshisekelo zamakhasimende.Siyaqhubeka ...
Singochwepheshe ekusetshenzisweni komkhakha we-ultrasonic. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kuhlelo lokusebenza lwe-ultrasonic futhi sinokuqonda okuthile ngesiko lezwe ngalinye. Ngakho-ke, singaqonda futhi siphakamise izixazululo ezintsha ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende, futhi sithole inqubo efaneleke kakhulu yokwakhiwa nokukhiqizwa.